Weerarka Iiraan: Yaa ka faa'iideysanaya, yaase ku khasaaraya xiisadda Iiraan iyo Mareykanka? - BBC News Somali
Weerarka Iiraan: Yaa ka faa'iideysanaya, yaase ku khasaaraya xiisadda Iiraan iyo Mareykanka?
10 Jannaayo 2020
Lahaanshaha sawirka NurPhoto
Cidda faa'iideysa ama khasaareysa waxay ku xirantahay tallaabooyinka xiga ee ay qaadi doonaan Washignton iyo Tehran.
Inkastoo uu ka dhintay sarkaal sare oo milatari ah, Iiraan waxay faa'iido yar ka heshay dilka Qasem Soleiman.
Tallaabada uu Trump ciqaab ku muteysan karo haddii uu Iiraan ka qaado
Image caption Soleimani wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ugu sarreysa milatariga Iiraan
Sanadkii lasoo dhaafay, xaaladdu waxay sii xumaatay ka dib markii ay Iiraan soo ridday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo uu leeyahay Mareykanka. Sidoo kale waxay gacanta ku dhigtay maraakiib. Waxaa kale oo Iiraan lagu eedeeyay inay taageereysay weerarro gantaallo ah oo uu ka mid ahaa kii lagu qaaday warshadaha saliidda sifeeya ee Sacuudiga - arrintaasoo ay beenisay.
Dilkii Soleimani ka dib, durbadiiba Iiraan waxay sameysay aargoosi, iyadoo weerar ku qaadday saldhigyada Mareykanka ee dalka Ciraaq. Dowladdu waxay tallaabadaas ka faa'iideysaa in ay sii heysato taageerada shacabka, maadaama ay muujisay inay wax sameyn karto haddii uu Mareykanku tallaabo kale ka qaado.
Iyadoo hadda ay Iraan saaran yihiin cunaqabateyno culus, cadaadisna uu ku heysto inay u hoggaansanto heshiiskii bacriminta nuclear-ka, haddii ay xaaladdu sii xumaato waxaa suurtagal ah in ay go'doon sii gasho.
Wuxuu sidoo kale farriin muujineysa taageero u diray dalalka uu xulafada la yahay ee Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya, oo ay cadow isku yihiin Iiraan.
Image caption Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in Iiraan ay dib u dagtay markii ay gantaallo ku weerartay saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq
Si kooban, xoogagga Shiicada ah ee ay Iiraan taageerto ee ku sugan dalka Ciraaq waxay ka faa'iideysan karaan xiisaddan hadda taagan.
Image caption Mudaharaadyada waxaa ka qeyb galayay ururrada bulshada ee dalka Ciraaq
Maleyshiyaadkan - iyo dhammaan ururrada siyaasadeed ee ka dhisan Ciraaq - waxay dhimashada Soleimani u adeegsan karaan inay dib u hantaan saameyntii ay Ciraaq ku lahaayeen iyo inay sharciyeystaan sii joogista waddankaas.
Iiraan iyo Israa'iil waxay muddo dheer isku heysteen danaha gobolka bariga dhexe, waxayna dowladda Iiraan dooneysay in la burburiyo xukuumadda Yuhuudda.
Marka laga eego dhinaca Iisraa'iil, waxaa wali taagan halis badan oo iyaga ka dhan ah. Kuwaas waxaa ka mid ah taageerada ay Iiraan siiso dhinacyada cadowga ku ah Iisraa'iil, sida ururka fadhigiisu yahay Lubnaan ee Xisbullah iyo madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Asad.
Dhinaca Iisraa'iil, waxay u badan tahay in tallaabadan laga soo dhaweeyay, loona arko inay tahay mid dani ugu jirto amniga Israa'iil iyo yareynta dhaqdhaqaaqyada kooxha ay Iiraan taageerto.
"Israa'iil waxay si buuxda Mareyknaka ugu garab taagan tahay dadaalka uu ugu jiro sugidda nabadgalyadiisa", ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, oo hadlayay weerarka ka dib.
Si gaar ah waxay u khuseeyaan dibadbaxyadii dhawaan ka dhacay dalalka Ciraaq, Lubnaan iyo Iiraan, oo dadweynahoodu ay ka careysan yihiin shaqo la'aan iyo musuqmaasuq.
Image caption Mudaharaadeyaasha Lubnaan waxay ka cabanayaan musuqmaasuq iyo sinnaan la'aan
Image caption Mareykanku wuxuu Iiraan ku eedeeyay weerarradii lagu qaaday maraakiibta ku sugneyd gacanka Cumaan
Yurub oo horayba ula dhibaatooneysay inay xal u hesho badbaadinta heshiiskii nuclear-ka Iiraan, waxay hadda si ay ka yeesho la'dahay xiisadda ka dhex taagan Iiraan iyo Mareykanka.